DAAWO+XOG: Shirka Beesha Caalamka & DF Soomaaliya ee Baydhabo, miyaa laga reebay JL iyo Puntland?
BAYDHABO(P-TIMES) – Kulanka gaarka ah ee dhexmaray Xukuumada Faderaalka Soomaaliya iyo Wakiilada caalamiga ah ee ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa ahaa mid heerkiisu sareeyo, oo looga hadlay geedi socodka arrimaha muhiimka ah ee Soomaaliya, waxaana laga wada hadlay qorshayaasha ku wajahan mashaariicda horumarineed iyo gogol xaarka kulan-weynaha Soomaaliya iyo Saaxiibadeeda caalamiga ah oo dhici doono bisha October.
Wasiirka qorsheynta & Iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Cusmaan ayaa sheegay in kulanka intii uu socday lagu soo qaaday arrimaha siyaasadda, wuxuuna sheegay in uu qeyb ka yahay geedi socodka wadajirka ah ee wadaan Soomaaliya iyo Beesha Caalamka.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay kulankan markii hore qorshuhu ahaa in ay wadajir uga qeybgalaan maamul gobaleedyada iyo dawladda Soomaaliya, balse markii ay diiday Puntland laga reebay dhamaantood.
Dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in ay bisha October horgeyso bulshada caalamiga ah qorshaheeda ku wajahan horumarinta dalka oo ay ku jiraan qoondooyinka caalamiga ah ee ay u baahan tahay, sidaas oo kale arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayaa qeyb ka noqon doona.
Xog soo gaartay Puntlandtimes, waxay cadeynaysaa in haddii aan la xalin ka hor bisha September 20-keeda khilaafka u dhaxeeya dawlad gobaleedyada iyo dawladda Soomaaliya ay ka dhiganaan doonto in Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Banaadir iyo Galmudug ay tagi donaan gogashan caalamiga ah.
Puntland ayaa dhawaan diiday ka qeybgalka kulan looga hadlayay arrimaha Kheyraadka dalka oo lagu qaban lahaa Garoowe, iyadoo sabab uga dhigtay in arrimaha u dhaxeeya Jubbaland iyo Federaalka xal laga gaaro, taas oo ahayd mid ay ka xumaadeen Madaxda Xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya.